Alan Shearer ayaa saadaaliyay halka ay Man United ku dhamaysan doonto Premier League xilli ciyaareedkan
HomeCiyaaroAlan Shearer ayaa saadaaliyay halka ay Man United ku dhamaysan doonto Premier League xilli ciyaareedkan
United ayaa ku dhameysatay kaalinta seddexaad xilli ciyaareedkii hore laakiin weeraryahankii hore ee Newcastle ayaa rajeynaya inay Chelsea ka booddo markan ka dib dhowr xiddig oo caan ah oo ay ka iibsatay suuqa kala iibsiga.
Chelsea ayaa la soo saxiixatay Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr iyo Thiago Silva, halka United ay ku soo dartay kooxda waayeelka ah xidiga reer Holland Donny van de Beek. Dean Henderson ayaa ka soo laabtay amaah hal xilli ciyaareed ah oo uu ku joogay Sheffield United si uu tartan ugu helo David de Gea dhanka goolhayaha.
Alan Shearer ayaa saadaalinaya in Manchester United ay ku dhameysan doonto kaalinta afaraad ee Premier League xilli ciyaareedkan.
“United waxa ay kor u eegi doontaa miiska kadib orodkoodii weynaa ee ay ku dhammeysay kaalinta seddexaad, laakiin ka sii fiicnaanshiyaha dhameystirkaas ayaa dhib weyn ku noqon doonta iyaga sida ay wax u socdaan,” ayuu yiri Shearer.
"Ma hubo inay (United) leeyihiin qoto dheer oo ay ku adkeysan karaan tartan, inkasta oo aan filayo mid ama laba saxiix oo kale inay la socdaan Donny van de Beek iyo haddii Jadon Sancho uu ka mid yahay waan fahmi karaa haddii taageerayaashoodu ay bilaabeen dagaal.
“United waxay ku fiicnaan doontaa in la daawado xitaa haddii aysan helin Sancho, laakiin runtii waxaan xiiseynayaa inaan arko sida xaaladdooda goolhaye ay noqondooto maxaa yeelay waxaan arki karnaa dagaal dhab ah oo ah inaan noqdo lambarka koowaad wuxuuna u dhexeeyaa David de Gea iyo Dean Henderson. "
Shearer ayaa intaas ku daray: “Waxaan u sadaaliyay Manchester City inay noqoto Champion xili ciyaareedkaan, laakiin aad ayay u adag tahay in hada la saadaaliyo waxa dhici doona maadaama suuqa kala iibsiga uusan xirmi doonin ilaa 5 bisha October.